हिटलरसँग किन गरे इमरानले मोदीको तुलना, कस्ता थिए हिटलर ?
केशरमणि कटुवाल काठमाडौं, २७ साउन
नरेन्द्र मोदी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् । पाँच वर्षअघि सत्तामा आउँदा नरेन्द्र मोदीसँग धेरैले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । सबैले भन्थे, ‘वाह ! नेता भनेको त मोदीजस्तो पो हुनुपर्छ ।’
भारतमा मोदीको व्यक्तित्वको उचाइलाई गत निर्वाचनमा उनको भाजपाले ल्याएको मतसँग तुलना गरिन्छ । मोदी यो समयमा धेरैपटक चर्चा र विवादमा आएका छन् ।
जम्मु काश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्ने भारतको निर्णयपछि मोदीलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलरसँग तुलना गरेका छन् ।
मुस्लिम बहुल काश्मीरलाई प्राप्त विशेषाधिकारकै कारण जम्मु काश्मीरमा बाहिरबाट आउने कसैले पनि जग्गा किन्न पाउँदैनथे ।
धारा ३५ (ए) को प्रावधानअनुसार कुनै भारतीयले काश्मीरी महिलासँग विवाह गरेमा उसको नागरिकता रद्द हुने तर पाकिस्तानीसँग विवाह गरेमा पाकिस्तानी पुरुषले समेत नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि थियो ।
तर, सरकारले धारा ३७० र धारा ३५ (ए) खारेज गरेसँगै सबै भारतीयले काश्मीरमा जमिन किन्न पाउनेछन् । यसलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान काश्मीरको जनसंख्यामा परिवर्तन ल्याएर मुसलमानलाई अल्पसंख्यकमा पुर्‍याउने कदमका रूपमा लिन्छन् ।
त्यसका साथै हिन्दुवादी भएको आरोप लाग्ने मोदीले मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा चालेको कमदलाई हिन्दुवादी मान्यताबाट निर्देशित र मुस्लिमविरोधी कदम भएको इमरानको ठम्याइ छ ।
उनले मोदीको तुलना यहुदीको नरसंहार गर्ने तानाशाहसँग गरिरहेका छन् । यहाँ मोदीलाई हिटलरसँग तुलना गर्न खोजिएको होइन । को थिए त हिटलर ? हिटलर कस्ता व्यक्ति थिए ? उनीबारे हामी यहाँ उल्लेख गर्नेछौं ।
को हुन् हिटलर ?
तानाशाही र क्रूर शासकको परिचय दिनुपर्‍यो भने अहिले पनि सबैले लिने नाम हो, हिटलर अर्थात् जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर । कुनै अशिष्ट मान्छेसँग बहस भयो, स्कुलमा कुनै कडा स्वभावको शिक्षक वा अफिसमा तपाईमाथि सधैं निगरानी राख्ने व्यक्ति छ भने उनलाई पनि हिटलर भनेर सम्बोधन गरेको सुन्न पाइन्छ ।
बाल्यकालदेखि नै जुन हिटलरको नाम सुनेर हामी यत्रो भएका छौं, तिनै निरंकुश हिटलरले ३० अप्रिल १९४५ मा गोली हानी आत्महत्या गरेका थिए । २०औं शताब्दीका क्रूर तानाशाह हिटलरबारे केही रोचक किस्सा पनि छन् ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९३३ मा समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याएपछि उनले जर्मन सत्तामाथि कब्जा जमाए । उनको जन्म २० अप्रिल १८८९ मा अस्ट्रियाको ब्राउनउ एम इनमा भएको थियो ।
१७ वर्षको उमेरमै बाबुको मृत्यु भएपछि भियना गए । उनी फाइन आर्टसका विद्यार्थी भए । आर्ट पढेका हिटलर पैसाको अभावमा हातले चित्र बनाएका पोस्टकार्ड बनाएर बेच्थे । यही समयमा उनको साम्यवादी र यहुदीप्रति घृणा पैदा भयो ।
आज पनि छन् हिटलर आतंकका निशाना
पहिलो विश्वयुद्धको समयमा उनी सेनामा भर्ती भए र फ्रान्सका केही लडाइँमा भाग लिए । सन् १९१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य भयो, जसमा जर्मनीको नराम्रो पराजय भयो । युद्धमा घाइते भएका उनी उपचारका लागि अस्पतालमा थिए । विश्वयुद्धपछि जर्मनसँग अपमानजनक सन्धि गरिएकोप्रति हिटलर दुःखी भए ।
त्यसै वर्ष उनले नाजी दलको स्थापना गरे । उनको उद्देश्य नै साम्यवादी र यहुदीहरूको अधिकार खोस्नु थियो । भूमिसुधार गर्ने भर्साई सन्धि अन्त्य गर्ने र एक विशाल जर्मन साम्राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य हिटलरले जर्मन जनतासामु राखे । बिस्तारै उनको प्रभाव बढ्न थाल्यो ।
हिटलरले स्वस्तिकलाई आफ्नो दलको चिन्ह बनाए, खैरो रंगको पोसाक लगाउने सैनिकको टुकडी तयार पारे । सन् १९२३ मा आत्मकथा ‘मेरो संघर्ष’ लेखे । जसमा उनले आर्य जाति संसारकै श्रेष्ठ जाति भएको र जर्मन आर्य भएकाले उनीहरूलाई विश्वको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने लेखेका छन् ।
सन् १९३०–३२ मा जर्मनीमा बेरोजगारी बढ्यो । संसदमा नाजी दलका सदस्यको संख्या २३० भयो । १९३२ को निर्वाचनमा हिटलर राष्ट्रपतीय निर्वानमा पराजित भए । १९३३ मा चान्सलर भएपछि उनले जर्मन संसद् भंग गरिदिए र कम्युनिस्ट पार्टीलाई गैरकानुनी घोषणा गरे ।
६० लाख यहुदीको हत्या
सन् १९३३ मा हिटलर जर्मन सत्तामा पुगे र एक नश्लवादी साम्राज्य स्थपना गरे । यदि यहुदीलाई अति घृणा गर्थे । उनको त्यो घृणा नरसंहारको स्वरूप लिएर बाहिर आयो । मानव इतिहासमा यो चर्चित नरसंहार थियो । जसमा ६० लाख यहुदीको हत्या गरिएको थियो । यसरी मारिएकामा १५ लाख बच्चा मात्रै थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठूलो कारक
दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठूलो कारक हिटलर नै थिए । उनको आदेशमा नाजी सेनाले पोल्यान्डमा आक्रमण गरे । फ्रान्स र बेलायतले पोल्यान्डको सुरक्षा दिने वाचा गरेअनुसार दुवैले जर्मनविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । त्यसपछि जर्मनीले रुसमाथि हमला गर्‍यो ।
विवाहको भोलिपल्ट आत्महत्या
आत्महत्याको केही घण्टाअघि हिटलरले आफ्नी प्रेमिका इभा ब्राउनसँग विवाह गरेका थिए । ‘हिटलर्स लास्ट डेः मिनेट बाई मिनेट’ किताबअनुसार ३० अप्रिलमा आफैंलाई गोली हानेका थिए । त्यस समयमा उनी बंकरको कन्फ्रेन्सका रूममा थिए ।
पुस्तकका अनुसार उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि जर्मनीको पराजयबाट धेरै दुःखी थिए । यसैका कारण उनी डिप्रेसनमा पुगेका थिए । हिटलरले आत्महत्या गरेको केही समयमै उनकी प्रेमिका इभा ब्राउनले पनि विष खाएर आत्महत्या गरिन् ।
त्यसअघि उनले लेखाएको पत्रमा लज्जाका कारण आफू र आफ्नी पत्नीले मृत्यु रोजेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले यो आफूहरूको इच्छा भएको र मृत्युलगत्तै शव जलाउन भनिएको थियो ।
बिहान ५ बजे हिटलर र उनकी पत्नी बंकरमा बनेको आफ्नो कोठामा गए । त्यसबेला रुसले जर्मनीमा भीषण बमबारी गरिरहेको थियो । रुसी सेना त्यहाँ पुुग्न लागेको थियो । त्यसअघि हिटलरले आफैंलाई गोली हाने र एउटा तानाशाहको अन्त्य भयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २८, २०७६, ०४:५७:००
काँग्रेस महामन्त्रीले नै बहिस्कार गरे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
केशरमणि कटुवाल @Kesharmani
सु की यात्राः नोबेल शान्ति पुरस्कारदेखि हेगसम्म
हैदराबाद र उन्नाव : बलात्कारमाथि राजनीति
यस्तो छ भारत–पाक तनाव ल्याउने ‘इजरायली मोडल’
हङकङका चार क्रान्तिकारी जसले चीन पक्षधर राजनीतिज्ञलाई पछारे
विप्लवले रोजेको 'अप्ठ्यारो' बाटो